Ny tranga momba ny zom-pirenena
Iza no azo ampiharina
Data fiarovana sy politika manokana
ny orinasa Mpanolo-tsaina AAAA ary ny mpiasan'izy ireo dia hiezaka hiaro ny angon-drakitra tsiambarateloo sy ny mombamomba anao. Nasehonay etsy ambany ny fomba fanangonana sy ny fampiasanao ny angon-drakitrao.
1. Ahoana ny fampiasana ny fampahalalana sy ny angon-drakinao
Mpanolo-tsaina AAAA manangona sy mampiasa ny angon-drakitrao sy ny mombamomba anao manokana mba hamahana ny olan'ny fitantanana sy ny fanohanan'ny mpanjifa, hanampy ny mpanjifantsika. Ampiasainay ny fampahalalana sy ny mombamomba anao manokana hanaraha-maso ny fanarahana ny lalàna rehetra sy ny fifanarahana.
2. Mampiasa ireo fampahalalana sy angon-drakitrao amin'ny tanjona marketing
Raha tianao ny tsy hampiasa ny fampahalalana momba anao manokana ho an'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana, azafady mba hifandraisa aminay amin'ny info@vnz.bz ary hataonay antoka fa tsy mahazo ny tolotra marketing ianao na fampandrenesana hafa avy aminay.
3. Fangalarana fampahalalana manokana sy angon-drakitra manokana
Ny mombamomba rehetra ny orinasantsika Mpanolo-tsaina AAAA ny tahiry dia tonga mivantana aminay avy aminao, toy ny mpanjifanay. Voaro tsara sy voatahiry ao amin'ny orinasanay ny angona rehetra anananao raha tsy azon'ireo antoko fahatelo ampiasaina izy ireo. Hametrahantsika ny mombamomba anao manokana ny fotoana mety hanohanana sy hitantanana ny serivisy.
4. Ny mombamomba anao manokana izay angoninay ny orinasa
Rehefa mifandray amin'ny orinasa izahay amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny birao, ny telefaona, ny fomba fampitaovana elektronika, ary ny fitsidihana ny loharanon-tserasera amin'ny Internet, dia manangona angon-drakitra momba ireo mpampiasa sy mpanjifanay izahay izay mametraka baiko amin'ny alàlan'ny fifandraisana etsy sy eroa mifandray.
Ny angona angoninay dia mety misy fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny dokam-barotra, fampahalalana momba ny tambajotra, angon-drakitra momba ny rafitra, serasera ary fitaovana mifandray, ny fampahalalana momba ireo mpandefa sy mpahazo ireo hafatra nalefa na noraisin'ny orinasa. Azontsika atao ny manangona vaovao momba ny fotoana sy ny toerana hidirana ao amin'ny serivisy na ny loharanon-karena. Manangona fampahalalana momba ny faharetan'ny fifandraisana izahay, ny fikorianan'ny tsindry ary angon-drakitra rafitra hafa.
Ity fampahalalana ity dia mety manondro anao sy ireo fidirana miditra ary amin'ireo orinasa hafa.
Raha manahy momba ny angon-drakinao ianao dia afaka mijery ny tranokalanay tsy fantatra.
Noho ny fangatahanao dia afaka manome anao fanazavana izay harenanay momba anao izahay, mifanaraka amin'ny mombamomba anao. Ny fampahalalana anao dia tsy misy raha misy mpampiasa hafa, afa-tsy ny fepetra ho an'ny fampiharana ny lalàna sy ny fangatahan'ny manampahefana iraisana izay manan-jo hanao izany.
Manangona fampahalalana momba ny mpitsidika ao amin'ny tranokalanay izahay, manangona adiresy mailaka rehefa mifandray amin'ny orinasanay izahay, manangona ny nomeraon-telefaona sy data finday ny orinasanay rehefa mifandray amin'ny foibe fifandraisana aminay na amin'ny telefaona amin'ny mpiasa iray izahay.
Ny fampahalalana nalain'ny orinasanay dia ampiasaina amin'ny famakafakana anatiny sy ny fanatsarana ny serivisy, ny loharanon-tserasera ary ny asantsika ankapobeny.
Ny fampahalalana rehetra anananao dia tsy afindra any amin'ireo antoko fahatelo afa-tsy ny raharaha momba ny fanaterana entana aminao, ary ny fiantohana amin'ity serivisy ity, amin'ity tranga ity dia hafindra any amin'ny orinasa ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny orinasa izay hanatitra ny entana mankany amin'ny adiresinao sy ny fiantohana. orinasa. Amin'ny alàlan'ny fandaharana ny fandefasana entana ao amin'ny tranokalanay na amin'ny telefaona, manaiky ny fanomezana ny fampahalalana anao amin'ny antoko fahatelo izay tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ny fandefasana ity vokatra ity amin'ny adiresinao sy ny fiantohana azy ianao.
Raha tsy te hahazo hafatra avy aminay ianao raha tsy ilaina amin'ny ampahany amin'ny baikonao sy ny fampiharana azy, dia afaka manoratra aminay ao amin'ny adiresinay: info@vnz.bz
5. Fomba fitahirizana sy fiainana rakitra
Notehirizinay ao amin'ny tranon'ny mpanjifanay ny fampahalalana anao. Ity fampahalalana ity dia hampiasain'ny orinasanay ary mahangona ny fotoana voatahiry. Ilainay io fampahalalana io mba hanomezana fanontaniana sy famahana ireo olana momba ny serivisy ary ny takian'ny lalàna fitehirizana angon-drakitra. Izahay dia manana ny zo hitahiry izany vaovao izany rehefa vita ny serivisy sy ny fivarotana, na dia tsy mampiasa ny serivisy intsony aza izahay. Ny fampahalalana rehetra dia hotaomina amin'ny fotoana mahamety azy, raha tsy ny lalàna na ny manam-pahefana ary ny torolàlana dia mitaky azy hitandrina kokoa.
Izahay manana zo hamindra ny fampahalalana anao amin'ny antoko fahatelo mifandraika amin'ny fanatanterahana ny baikonay ho anao. Raha tsy misy ny fahazoan-dàlana fanampiny anananao dia ampitao aminay ny serivisy serivisy serivisy, ny orinasa fiantohana mifandray amin'io fanaterana entana io. Zontsika ny mandefa ny adiresinao, ny anarana sy ny anarany, ny laharana an-tariby ary ny angon-drakitra hafa ilaina ihany koa mba hamita izany filana izany. Tsy omenay amin'ireo orinasa ireo izay miasa mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fiarovana sy ny fitahirizana data fotsiny. Noho ny fangatahanao dia afaka mahazo fampahalalana avy aminay izahay, ary iza no nomena azy.
Tsy misy lisitr'ireo mpanjifantsika afindra amin'ny antoko fahatelo, afa-tsy ny fangatahana ataon'ny manampahefana fanjakana, raha misy.
7. Fampandrenesana mailaka, fifanarahana, vaovao ary fampiroboroboana
Izahay manana zo handefa fampandrenesana anao, mifanoratra, hifandray aminao amin'ny telefaona na amin'ny alàlan'ny tranokala raha toa ka nametraka baiko miaraka aminao izahay amin'ny fomba azo atao. Ny fifandraisana rehetra dia azo atao afa-tsy amin'ny alàlan'ny fifandraisana izay omenay. Izahay manana zo tsy dia mandefa vaovao momba ny vokatra, fihenam-bidy ary fampiroboroboana. Zonao ny mandà tsy handray ireo fampilazana ireo amin'ny alàlan'ny torolàlana amin'ny alàlan'ny torolàlana na amin'ny fanoratana aminay eto amin'ny info@vnz.bz
8. Fanaraha-maso mailaka
Amin'ny maha mpitantana ny filaminana dia manan-jo hamaky mailaka nalefa ho an'ny mpiasanay izahay. Raha toa ka misy votoaty tsy azo antoka amin'ny taratasy rehetra na ny miraikitra aminy, toy ny otrikaretina virus, dia manana zo hanala na hampihemotra izany isika.
9. Politika Cookie
Ny tranokalanay dia mampiasa cookies, izay singa amina paositra sy rakitra izay manatsara ny fampandehan'ny tranonkalantsika amin'ny solosainao. Ity ambany ity dia mamaritra ny fampahalalana rehefa manangona mofomamy izahay, ny fomba fampiasana azy ary rehefa itehirantsika.
Manan-jo hanafoana ny fisintahan'ny mofomamy ianao, nefa miaraka amin'izay, tsy afaka manome antoka ny fandidiana tsara amin'ny tranokalanay izahay.
Azonao atao ny mamaky misimisy kokoa momba ny cookies ao amin'ny Wikipedia Eto.
Manoro hevitra izahay hampiasa mofomamy amin'ny fampandehanana tsara sy mety amin'ny tranokalanay raha tsy azonao antoka na mila azy ireo ianao na tsia. Azonao atao ny manalefaka ny fampiasana mofomamy raha azonao antoka fa mila izany ianao. Tokony ho azonao ny hoe ny cookies rehetra dia ampiasaina amin'ny fanomezana ny serivisy tianao hampiasaina.
Azonao atao ny manakana ny fampidiranao ny fampiasana cookies. Tsy maintsy fantatrao fa ny fampiasana io fampiasana io mba hamerana ny fampiasana ny cookies amin'ny alàlan'ny navigateur dia afaka manova ny fiasan'ny tranonkala rehetra izay vangianao na mikasa ny hitsidika azy. Matetika ny tsy fahazoana mofomamy dia hanalavitra ireo endri-javatra sy ny fahaiza-manaon'ny tranokala sasany, noho izany dia manoro hevitra izahay mba tsy hanajanonana cookies.
Email Email Cookies mifandraika
Ny tranonkalanay dia afaka mahatadidy ilay mpampiasa raha efa efa voasoratra anarana miaraka aminay ianao, hampiseho aminao ny fampilazana sasany izay azo ampiasaina ho an'ireo mpampiasa voasoratra anarana na tsy manoratra. Manome serivisy famandrihana bilaogy izahay. Rehefa mampiasa io fiasa io izahay dia mampiasa mofomamy mahatsiaro anao.
Fanaterana baiko mifandraika mifandraika
Ny tranonkalanay dia mahatadidy ny baikonao miaraka amin'ny mofomamy, ireo vokatra nofantenanao ary tadidinao rehefa mampiasa ny tranonkalanao hampiasa ilay tranokala hanamora ny fanodinana ianao, ao anatin'izany ny fanafoanana na ny fanitsiana ny baikonao.
Ireo endrika Cookies
Raha mameno ny endri-javatra ao amin'ny tranokalanay izahay, ny cookies dia afaka mamonjy ny angon-drakitrao momba ny fampiasana na ny tali-monina.
Antoko fahatelo cookies
Ao amin'ny tranokalanay dia azo atao ny mampiasa mofomamy omen'ny antoko natokisana fahatelo. Eto ambany no hilazalazantsika misimisy kokoa ny mofomamy fahatelo mety ho tojo anao rehefa mampiasa ny tranokalanay.
Mampiasa Google Analytics izahay, izay ilainay mila manadihady ny tranokalantsika. Ny Cookies dia afaka manara-maso ny fotoana lany amin'ny tranokalanay, ny pejy takidihinao, ny votoatinao tianao, ny fotoana mitsidihanao ny tranokalanay.
Afaka mianatra bebe kokoa momba ny mombamomba ny mofomamy an'ny Google Analytics ianao Eto.
Averinay indray, fa raha hiasa tsara ity tranokala ity, dia manoro hevitra izahay hamela ny cookies hanodina.
Izahay dia mandray fepetra hentitra amin'ny fitandremana ny angon-drakitra ataonao ary mandray ny fepetra rehetra azo antoka izahay hiantohana ny fiarovana azy ireo. Miankina amin'ny angon-drakitra, mampiasa ny fiasa momba ny fiarovana ny tenimiafina, encryption, fanaraha-maso ny fidirana, backup, serivisy famindrana ary ny fanaraha-maso ny tontolo iainana ny fiarovana ny data anao amin'ny fatiantoka na fanararaotana.
FANGALANA: Tsy mitahiry antsipirihany ny carte de crédit na debit anao. Ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny karamanao nataonao taloha dia alefa foana fa tsy voatahiry.
11. Fanontaniana sy fangatahana
Raha manana fanontaniana fanampiny momba ny politika momba ny tsiambaratelo ianao, ny fiarovana ny data na ny fampiasana azy ireo ao amin'ny serivisinay, dia afaka mifandray aminay ianao amin'ity vaovao ity: info@vnz.bz
Ny zom-pirenen'i Saint Lucia haingana:
COVID -19 FIVAVAHANA AOKA
Tetikasa Real Estate
Tahirim-bolam-pirenena Saint Lucia
Md Lucia - toekarena
Md Lucia - Fandraharahana asa mora
Md Lucia - zava-misy sy statistika
Md Lucia - Fiainana sy fialamboly
© 2021, Ny zom-pirenen'i Saint Lucia Powered by Shopify